Lalana mandeha ho azy
Foibe fikarohana momba ny vokatra
Fikarohana vokatra metaly avo lenta
Mandrosoa stamping no vahaolana mahomby indrindra amin'ny fanosihosena izay afaka miantoka ny vokatra sy ny kalitao.
Mety misy ampahany maromaro amin'ny stamping izay atambatra amin'ny ampahany samihafa amin'ny endrika samihafa novokarina avy amin'ny stamping progressive.
Nandritra ny fotoana ela, ny fomba fanaraha-maso ny kalitaon'ny ampahany dia fanamby lehibe, mandra-pampiasantsika ny teknolojia fahitantsika ary mametraka ny rafitra CCD amin'ny fametahana mivoatra.
Ny rafitra dia manambatra ny asan'ny fanaraha-maso ny kalitao ao anatin'izany ny ampahany amin'ny endrika, ny refy fisavana, ny ampahany amin'ny fisavana.
Na inona na inona mitady ho faty fanariana ampahany vita amin'ny Alu, Zinc, na Mg, afaka manome anao ny serivisy tsara indrindra miaraka amin'ny teti-bola mety.
Ho an'ny ampahany sasany amin'ny fanariana maty izay mitaky milina fanodinana faharoa toy ny fandavahana lavaka, de-burring ary fametahana, dia afaka manome anao serivisy tokana izahay. Ity no vahaolana nentim-paharazana diecasting.
Mba hamonjena ny vidin'ny famokarana die casting, multi-slider die fanariana bobongolodia vahaolana tsara indrindra. Ho an'ny ampahany avy amin'ny lasitra fanariana maty multi-slider, tsy mila asa fanampiny amin'ny famongorana na poloney amin'ny ampahany.
Ireo dingana 2 ireo dia afaka mamonjy anao maimaim-poana amin'ny vidin'ny asa goavana. Ny fitambaran'ny fotoana tsingerin'ny fanariana dia mety ho fohy toy ny latsaky ny 10 segondra.
Miaraka matetika manome ny de-gating fanapahana fitaovana + automatique tsipika, amin'izany fomba izany ianao dia afaka mametraka de-gating amin'ny alalan'ny fitaovana fanapahana sy ny automatique tsipika saika tsy misy mpiasa ho anao mba hahazoana ny ampahany farany.
Fametrahana fampiasam-bola dia vahaolana tsara ho an'ny vokatra fanariana vokatra vita amin'ny vy, ohatra ho an'ny ampahany vita amin'ny 403SS sy 316SS, sns.
Ity dia vahaolana fanariana metaly taloha novolavolaina fanariana fasika. Ny fomba famokarana manontolo dia tena lava sy miadana.
Matetika dia maharitra iray volana sy tapany eo ho eo ny andiany famokarana iray. Rehefa avy nanao lasitra avy amin'ny Alu. na avy amin'ny vy dia ilaina koa ny lasitra savoka.
Ny tsy fahampian'ity vahaolana ity dia: ambany ny vokatra ao anatin'ny fotoana fohy, mila fotoana maharitra hanatanterahana ny dingana manontolo; Ny haben'ny ampahany dia kely kokoa amin'ny fandeferana raha ampitahaina amin'ny tsindrona plastika sy ny die-casting satria hatramin'izao dia mbola maro ny fomba fanao amin'ny tanana miaraka amin'ny mpiasa mavesatra ilaina; Ny endri-javatra sasany dia tsy azo amboarina ary tsy azo atao afa-tsy amin'ny fanodinana faharoa toy ny fikosoham-bary, ny fandavahana na ny famolahana.
Adiresy:Faritra indostrialy Honglaiya, Shatou, Chang'an Town, Dongguang City, Guangdong, Sina.